13 May 2021 Volume :9 Issue :15
Owayengumfundi wakudala e-UKZN, u-Joe Singh wamukele umklomelo omkhulu kwezempilo e-New Zealand.Click here for English version
Lo mfundi nguDkt Gagrath Pradeep Singh, odume ngelika-Joe, oyi-geriatrician e-North Shore Hospital e-Auckland.
Uhlelo lokuklomelisa lwase-New Zealand lwasungulwa mhla wama-30 ngoMbasa (April) wezi-1996, lusungulwa yiNdlovukazi u-Elizabeth wesi-II wase-United Kingdom ‘lusungulelwa abantu abakunoma yimuphu umkhakha abenze umsebenzi oncomekayo wokukhonza isihlalo sobukhosi nesizwe noma labo abahlonishwayo ngenxa yomsebenzi wabo oncomekayo, amakhono neqhaza labo lomsebenzi ovelele bewenzela Isihlalo sobukhosi noma abantu base-New Zealand bengabantu noma bengamasosha.’
Ngokukandunankulu neKhabhinethi yase-New Zealand, u-Singh wasungula ngokubambisana, wahola i-Shore Trials and the Research Unit (STAR Unit) kusukela ngonyaka wezi-1996. Ngesikhathi sobuholi bakhe bokuvolontiya, kwaba nocwaningo olungaphezu kwama-60 olwenza ukuthi iziguli zase-Waitemata District Health Board zikwazi ukuthola imithi emisha nezindlela zokuhlengwa ezivelele okwakungeke kwenzeke ngokwezempilo zendawo.
Indodana ka-Singh, u-Sudvir, engudokotela phesheya, yiyona ememezele lezizindaba ku-Twitter, yathi: “Yizindaba ezimnandi ukuzwa namhlanje ukuthi ubaba, u-Pradeep (u-Joe) Singh wase@WaitemataDHB, uklonyeliswe nge-Member of NZ Order of Merit eyingxenye ye-New Year Honours List! Siyaziqhenya ngaye.
U-Singh, owazalelwa e-Clairwood, eThekwini, usakhumbula eSikoleni Sobudokotela. ‘Ngafunda e-University of Natal eSikoleni Sobudokotela eMbilo, lapho ngahlangana khona nesingqazu esingumkami nomgani wami uDkt u-Bharati Narothum,’ kusho yena.
‘Kwakuyisikhathi esimnandi, isikhathi se-Black Consciousness noSteve Biko, owayengaphambi kwethu kancane. Sasilapha iziguli e-King Edward VIII yodumo, ngaleyo nkathi eyayingesinye sezibhedlela ezinkulu e-Southern hemisphere. Kwakumnandi esikoleni sobudokotela kanti sisengabangani nabantu abaningi esasifunda nabo.’
U-Singh, owaqala ukuba wuchwepheshe we-geriatrics ngenkathi usafufusa lomkhakha, useke waba ngumhloli e-Royal College of Physicians kusukela ngowezi-1995 nowe-Australian Exams kusukela ngowezi-2005. Uthanda ucwaningo kanti usenze ucwaningo ngaphezu kwezikhathi ezingama-60 kulelizwe naseNingizimu Afrika.
Eminyakeni engama-20 edlule, uke waba ngusihlalo we-Senior Doctors Committee e-North Shore Hospital egxile ekuxhumaneni nabaphathi.
U-Singh uyazifela ngeqakamba kanti ungukaputeni weqembu lodokotela abadala.